Ogaden News Agency (ONA) – Kal-fadhigii Golaha Dhexe ee JWXO oo Guul ku soo dhamaaday
Kal-fadhigii Golaha Dhexe ee JWXO oo Guul ku soo dhamaaday
Waxaa shalay oo taariikhda ay hayd 23-08-2013 la soo gabagabeeyay Kalfadhigii Golaha Dhexe ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) oo Gudoomiyaha JWXO Adm. Maxamada C. Cismaan oo 15kii Bishan u furay mudanaaysha Golaha Dhexe.
Sida uu nooga soo waramay wariyaha Wakaaladda ONA, waxaa shirka horyaalay arima badan oo muhiim u ah ururka, halganka ka socda gudaha dalka iyo dibadiisaba iyo isbadalada ka socda guud ahaan caalamka gaar ahaan gobolka Geeska Afrika. Waxaa ka soo qabygalay in ka badan 90% xubnaha Golaha Dhexe oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisaba, taasoo muujinaysa ahmiyadda uu lahaa Kal-fadhigan, waxayna mudanayaasha fadhiyeen 15-23kii Bisha, halkaasoo ay ku falanqaynayeen dhamaan ajendihii loo soo gudbiyay oo ka koobnaa qodobo mihiim ah oo wax weyn ka badali doona geedi socodka Halganka shacabka Somaliyeed ee Ogadenya.
Siduu noogu waramay Hogaanka Warfaafinta JWXO, Kal-fahdigan wuxuu ahaa mid lugu dajiyay Istraatiijiyad cusub oo la ambaqaadi doona marxaladan oo wax weyn ka badali doona geedi socodka halganka. Waxaa si qota dheer loo qiimeeyay xaaladaha guud iyo kuwa gaarka ah ee ku xeeran halganka, iyadoo hogaan walba loo dajiyay qorshe cusub oo uu ku hawlgalo sanadaha soo socda. Waxaa sidoo kale la qiimeeyay waxqabadkii hogaanada iyo wax qabadka mudanayaasha, qiimayntaa oo ahayd mid ku dhisan xilkasnimo iyo dareen masuuliyadeed. Wuxuu noo sheegay Hogaanka Warfaafinta in dib u habayn lagu sameeyay Hogaanada iyo Haya’adaha qaarkood iyadoo la eegayo habsami u socodka hawlaha halganka.
Ugu dambayntii wuxuu Kalfadhiga soo saaray Bayaankan oo ka tarjumaya Go’aanadii ka soo baxay;
Baaqii Kalfadhiga 6aad